MuIOS 11.3 isu tine rumwe ruzivo nezve izvo zvinogadziridzwa | IPhone nhau
MuIOS 11.3 tine rumwe ruzivo nezve kugadziridzwa
Apple iri pakati pekuyedza kukuru kugadzirisa dhizaini uye mushandisi interface yeApple App, ichipa vashandisi vayo kugona kutsva kunovatendera kuti vawane uye vatenge zvimwe zvirimo neiyo shoma nguva yakadyarwa.
Iyo yekuvandudza tabu hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeanonyanyo shandiswa nesu tese, zvirinani isu vedu vanosarudza kuve vanofambirana kana zvasvika kune software. Zvino Apple yakasarudza kuisa rumwe ruzivo nekungotarisa nezve izvo zvaticha gadzirise.
Uye ndezvekuti kunyangwe nekufamba kwemazuva tiri kutsvaga nhau diki muIOS 11.3, sisitimu inoshanda iyo iriko muchikamu chebeta uye kwatichawana mavambo ekutanga echave kutonga pamusoro pehutano hwe bhatiri iro Apple rakavimbisa kune vese vashandisi varo mushure mekukakavadzana kwakakosha nezve mashandiro ePhones ane bhatiri riri mune yepamusoro mamiriro ekudzikisira. Iyo App Store inoramba ichiwana kugadziridzwa kudiki, uye ndezvekuti zvese zviri pasi pekugadziriswa kana zvichikodzera mushandisi zvakanyanya kana zvishoma. Uye izvi ndizvo chaizvo kuwedzera kwazvino kuchitoro chekuwedzera cheIOS.
Vazhinji vedu takazviziva kubva pazuva rekutanga, kunyangwe chiri chinhu chisina kunyatsojeka. Iye zvino pazasi peiyo yekuvandudza uye nemitsara mitatu yekuzivisa nezve manyorerwo ekushandisa isu isu tichawana yakatsanangurwa mune grey rakasviba zvishoma iyo ruzivo nezvekuti ingani iyo yekudzokorora inorema (kurudyi) uye ndeipi vhezheni iyo iyo application ichasvika kana isu tagamuchira izvo zvirimo (kuruboshwe). Nenzira iyi, avo vanovandudza kuburikidza nharembozha yedhata vanozoziva mune imwe nguva kuti yakawanda zvataurwa yamboshandiswa. Kunyangwe isu tichigona kunzwisisa kuti vazhinji vashandisi vanosarudza iyo netiweki yeWi-Fi kugadzirisa maitiro avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » MuIOS 11.3 tine rumwe ruzivo nezve kugadziridzwa
Ndine yangu iPhone X ine yazvino vhezheni yeIOS, uye handina kumbobvira ndaenda pamusoro kuti ndione zvimwe zvese nezve kusimudzira chikumbiro; ndokuti, ini ndinongoona mitsara miviri yekutanga.
Ndini ndega here zvinoitika?
Ndine iPhone X uye kana "zvimwe" zvikaonekwa, kunyangwe paine mashoma App ayo andiri ayo anoratidza (semuenzaniso, iyo SwiftKey keyboard).
Makaralı kana AirPlay? Ndeupi mutauri wekusarudza